Caafimaadka iyo nafaqada - Xiamen Gelken Gelatin Co., Ltd.
1. Qoyaan tayada timaha, collagenku wuxuu ufiican yahay timaha waa inuu qoyo tayada timaha, timaha qeybta ugu weyn waa borotiin, hadii borotiin la'aan, nafaqada timuhu aysan ku filneyn, si sahal ah u qalasho iyo bifurcate, borotiin ku filan ayaa ilaalin kara nafaqada timaha, timaha daa jilicsan oo dhalaalaya;
2. Daryeelka maqaarka, kolajka ayaa u fiican maqaarka waa inuu awood u yeesho inuu si wax ku ool ah u daryeelo maqaarka, quruxda, maxaa yeelay kolajka wuxuu leeyahay shaqada maqaarka nafaqada leh, wuxuu si wax ku ool ah u ilaalin karaa baruurta maqaarka, wuxuu ilaalin karaa qoyaankiisa iyo dabacsanaanta iftiinka, wuxuu hagaajinayaa maqaarka dhaawacmay , si wax ku ool ah u adkeeya maqaarka, laalaabka, sii wad qoynta;
3. Faa'iidooyinka kolajiin ee feeraha ayaa ah in ay awood u yeeshaan inay soo nuugaan oo ay kor u qaadaan xabadka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay xabadka xabadka ayaa u badan dufan iyo unugyo isku xiran, oo kolajka uu yahay qeybta ugu weyn ee unugyada isku xira, isla markaana collagen ku filan ay si habsami leh u taageeri karto laabta oo ay ka tarjumeyso muuqaalka qaadista laabta;
4. Si looga hortago cudurada, kolajka wuxuu ilaalin karaa shaqada viscera, wuxuu ka hortagi karaa cudurada qaar, xubnaha iyo xubnaha jirka waxaa wax yeeleeya collagen. Kalinjiin la'aantu waxay si daran u saameyn doontaa caafimaadka xubnaha, xitaa waxay sababi doontaa cudurada qaar. Haddii borotiinka kolajka si buuxda loo buuxiyo, wuxuu ku kabi karaa xubnaha taranka, wuxuu caawin karaa nafaqada iyo dhaqdhaqaaqa xubnaha visceral, wuxuuna si wax ku ool ah uga hortagi karaa mid ka mid ah cudurrada qaarkood;
5. Si looga hortago lafo-beelka, collagen-ku wuxuu u fiican yahay lafaha si looga hortago lafo-beelka. 70% iyo 80% waxyaabaha dabiiciga ah ee lafaha kujira waa kolajiin. Sidaa darteed, marka lafaha la soo saaro, fiilooyinka kolajka ku filan waa in la soosaaraa si loo sameeyo qaab dhismeedka lafaha. Sidaa darteed, dadka qaar waxay ugu yeeraan borotiinka kolajka sida laf lafta. Luminta collagen ama collagen la'aanta ayaa sababi doonta cudurka lafo-beelka ee Class B;
6. Collagen wuxuu leeyahay shaqada qaabeynta muruqyada. Collagen wuxuu kaa caawin karaa dhisida murqaha. Waxay ku kordhin kartaa kolajka waxoogaa yar oo maalinle ah, waxay dhiirrigelin kartaa dheecaanka hoormoonka koritaanka iyo koritaanka murqaha, iyo kaabalajka oo dheeri ah ayaa ilaalin kara xoogga murqaha;
7. Collagen wuxuu ilaalin karaa caafimaadka xididdada dhiigga, collagen wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta caafimaadka xididdada dhiigga. Kolajiin badan ayaa hayn kara dabacsanaanta xididdada dhiigga, sidaas awgeed waxay ka hortageysaa dhacdooyinka calaamadaha xun sida dillaaca xididdada dhiigga iyo xididdada dhiigga.